Habeynta Belize LDC Macluumaadka Shirkadda Xaddidan ee Xadidan
Habeynta Belize LDC
A Belize LDC, ama Belize Limited Duration Company, waa maxaliga degaanka ee Belize LLC. Ereyga "mudo xaddidan" waxaa loola jeedaa nolol maalmeedka 50. Shirkadda ayaa si joogto ah dib loogu cusbooneysiiyo kordhinta sannadlaha ah ee 50. A Belize LDC waxaa la aasaasay sida hoos timaada Sharciga Ganacsiga Ganacsiga Belize International. Sida LLC, sida caadiga ah, ma jirto wax canshuur ah oo ka jira heerka shirkadda. Belize LDC sidoo kale waxaa loo barbardhigaa LLCs ee Maraykanka. Sida LLC, ayaa loo maamulaa iyadoo la eegayo shuruudaha heshiiska shaqadeed, halkii ay ka ahaan lahayd sharciyada shirkadaha isticmaala.
Gargaarka Shirkadda Belize LDC
Dad badan ayaa dareensan in LLC-ga iyo LDC ay yihiin kuwa la barbar dhigi karo, laakiin waa ay jiraan, laakiin waxaa jira kala duwanaansho mid ay tahay inuu dib u eego. Taa bedelkeeda, LLC-ga, nolosha caadiga ah ee caadiyan ahaan jirtay soddon sano oo kuyaala xukuno badan, LDC waxay bixisaa nolol konton sano ah. Shirkadda waa in ay wax ku darsataa shuruucda si ay u yareeyso nolosha shirkadda illaa konton sano ama ka yar, laga bilaabo taariikhda diiwaangelinta rasmiga ah ee shirkadda LDC. Sida lagu sheegay, mar markaan marayo, qof ayaa awood u leh inuu diiwaangeliyo si uu u sii wato jiritaanka shirkadda. Waxaa intaa sii dheer, Belize waxay u baahan tahay shirkadahan inay ku daraan "Shirkadda Durayga Xadidan" ama LDC dhamaadka magaca.
Faa'iidooyinka kale ee Belize LDC waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Belize LDC waa lagaa dhaafaa canshuurta Belize
Sameynta LDC ee magaalada Belize waa mid dhakhso badan oo fudud (waana in lagu sameeyaa wakiil)
Belize LDC sharciyadu waxay u oggolaaneysaa in si weyn loo daboolo.
A Belize LDC ayaa awood u leh inuu sameeyo nooc kasta oo ganacsi ah oo aan mamnuucin sharciyada Belize ama lagu xaddidayo (ujeedo gaar ah).
Belize LDC waxaa laga yaabaa inuu leeyahay xubin keliya iyo maamul. Xubnaha iyo maareeyayaasha uma baahna inay degan yihiin dalka.
A Belize LDC waxaa laga yaabaa in lagu sameeyo luuqad kasta (waxaa loo soo gudbiyey si turjumaad ah oo Ingiriisi ah oo turjuman)
Shahaadada qaabeynta waxaa sidoo kale lagu siiyaa warqad ajnabi ah.
Uma baahnid inaad si fudud u bilowdo shirkad cusub si aad u sameysid Belize LDC. Waxaad sidoo kale u wareejin kartaa shirkad hadda jirta oo u beddeleysa Belize LDC. Sidaa shirkad horey u sameysey Mareykanka ama UK, tusaale ahaan waxaa loo bedeli karaa Belize LDC waxayna sii wadi kartaa da'diisa. Dad badan ayaa doorta in ay bedelaan hay'adahooda hadda jira maxaa yeelay Belize ma canshuurayso LDCs at heer shirkadeed.
Haddii uu Belize LDC haysto milkiile Maraykan ah, inta badan lataliyeyaashu waxay soo jeediyaan foomka canshuurta IRS 8832. Doorashooyinka ugu caansan ee lagu sameeyay foomkan waxaa loogu talagalay xaaladda ajnabiga ah ee ajnabiga ah ee shirkadaha mulkiilayaasha ah iyo shuraakada shisheeye ee shirkadaha leh labo ama ka badan milkiilayaal. Tani waxay kaa caawineysaa in lagaa ilaaliyo canshuurta Maraykanka ee heerarka shirkadda. Taas bedelkeeda, mas'uuliyadda canshuurtu waxay si fudud ugu qulqulayaan xubinta (s). Tani waxay badbaadinaysaa lacagta canshuurta ee caadiyan u baahan doonta in lagu bixiyo heerka shirkadda ka dibna mar kale heerkooda. Laga soo bilaabo Belize LDC waxaa jira hal heer oo canshuur: hal shakhsi.
Sida loo qaabeeyo Belize LDC
Sidoo kale sameynta shirkad LLC ah oo ku taal Belize, marka la sameynayo LDC, shirkaddu waxay u baahan tahay in lagu sameeyo wakiil. Waxaad bixin doontaa khidmaddaada ujrada wakiilka (sida middan) si loo sameeyo shirkad Belize ah. Belize ma ogola shirkad in la sameeyo iyada oo aan la isticmaalin wakiil.
Inta badan macluumaadka loo baahan yahay si loo diiwaan geliyo shirkadaada waxaa lagu dhameyn karaa telefoonka, internetka, fakiska ama boostada. Taleefoonka bilawga ah, waxaad dooraneysaa magac.
Mulkiilaha / Agaasimuhu waa inuu keenaa nuqul ka mid ah baasaboorka shaabadaysan iyo caddaynta cinwaanka wakiilka. Wakiilka ayaa si sharci ah uga dalbanaya dawladda Belize kadibna isticmaali doona macluumaadkaan si ay u sameeyaan baaritaan asal ah oo ku salaysan taxadar muujinaya milkiilayaasha liiska shirkadda.
Ka dib marka dukumiintigaaga diiwaangelinta dhamaystiran yihiin, wakiilkaaga ayaa soo gudbin doona Qoraalka iyo Qodobada Ururka ee shirkadda. Wakiilka waa inuu markaa u gudbiyaa dawladda Belize iyo sidoo kale khidmadaha loo baahan yahay.
Ka dib markii Belize la soo gudbiyo dukumeentiyadaada, kadibna waxaad heleysaa shahaadada sameynta, sameynta rasmiga ah.
Xasuuso inaad u soo gudbiso kharashka sanadlaha ah ee wakiilkaaga sanad walba si aad u buuxiso shuruudaha dawladda Belize.
Sida Belize LDC ay u Ilaaliso Hantidaada
Iyada oo Belize LDC, milkiilayaasha waxay leeyihiin sharciyo dheeraad ah si ay u ilaaliyaan hantida iyo hantida shakhsi ahaaneed iyada oo loo marayo qodobada ururka, wax aan la bixin Shirkadda Belize. Marka la samaynayo qodobbada ururka, xubnaha LDC ayaa go'aan ka gaari kara in ay u oggolaadaan bedelka saamiyada ama hantida kale ee shirkaddu ka reeban haddii xubnaha oo dhan ay ku heshiiyaan isbedelkaas. Taasi waxay ka caawisaa ka hortagga qof ka soo horjeeda xubin ka noqoshada danteeda shirkadda. Marka laga reebo xubnaha ka soo horjeeda xaddidan, haddii xubnaha ay oggolaadaan inay iibiyaan qayb ka mid ah shirkada, xubnaha waa in ay sameeyaan qaraar qoran. Qaraarku wuxuu qeexi doonaa go'aanka ah in la wareejiyo iyo inta ay daneynayso shirkadda inay bedesho.
Marka lagu daro qodobada ku jira qodobbada ururka Belize LDC, deynta xubin ka mid ah shirkadu ma saameynayso dhammaan xubnaha guud ahaan. Sidaa darteed, haddii hal xubin oo xubin ka ah shirkaduhu ay kufsadaan dacwad isla markaana LDC-daada si sax ah loo sameeyay, xitaa haddii dacwada lumo, shakhsiga u hoggaansamaya maxkamaduhu kuma dabaqi karo xiisaha lahaanshaha xubinimada shirkadda. Lacagta badbaadada lihi waa hanti dheeraad ah oo aan la heli karin shirkadaha heerka Belize haddii aysan codsanin inay beddelaan Belize LDC.
Sida la mid ah US LLC, qoraallada LDC waxay u oggolaan karaan maamulaha inuu maamulo shirkadda ama shirkadda si ay u doortaan xubno ka tirsan ururka. Tani waxaa loo yaqaan "maamulaha maaraynta" ama "xubin ka ah kooxda." Marka ugu horeysa, qandaraas, oo laga yaabo inuu xubin ka yahay ama aan xubin ka ahayn, ayaa maamula shirkadda. Qorshaha labaad, awoodda uu ku shaqeynayo shirkadu wuxuu u tagay xubnaha. Iyada oo xulashada maamulayaasha loo qoondeeyay, shirkadu markaa uma baahna inay ku qoraan Guddi Maamul. U ogolaanshaha noocaan kantaroolka ah ayaa faa'iido badan leh marka shirkadu ay la macaamilayso maalgashadeyaal sababtoo ah maamulayaasha maaraynta shirkadda ayaa wali haysta xakamaynta go'aamada shirkadda.
Xubnaha waxaa laga iibsan karaa saamiyadooda, ilaa inta doorashadan lagu qeexay heshiiska hawlgalka iyo / ama maqaallada. Intaas waxaa sii dheer, dhacdooyinka joojin kara xiriirka xubinta ee shirkadda waa in sidoo kale lagu dhejiyaa qoraallada iyo / ama heshiiska shaqada. Xuquuqda xubno shirkad hore waa in lagu daraa. Sidaa darteed, haddii loo ogol yahay, xubnihii hore waa in la soo iibsadaa, iyo xeerarka geeddi-socodka waa in si cad loogu qeexaa qodobada iyo / ama heshiiska shaqada.
Shuruudaha shirkadda, shirkadu waxay labadaba qaybin karaan oo kala saari karaan saamiyada labadaba midkoodna masuuliyad xaddidan ama aan xadidneyn. Inta badan, xubnaha intooda badani waxay doonayaan inay yar yahiin sida ugu macquulsan, sidaas awgeed qaabkan ayaa u ogolaanaya mas'uuliyadda shirkadan lafteeda inay ku sii jirto shirkadda oo xubnuhu ka ilaaliyaan masuuliyadda shakhsi ahaaneed.
Sidaa daraadeed, mid ayaa arki karaa ka dib marka dib loo eego qaar ka mid ah faa'iidooyinka shirkadda dheeraadka ah ee ay bixiso Belize LDC, sababta ay shirkado badan oo ganacsi u doortaan inay samaystaan ​​shirkad xaddidan oo kooban oo ku taal Belize. Caadi ahaan, LDC waxay si weyn u siineysaa mulkiilayaasha ganacsiyada inay ka ilaaliyaan dacwooyinka, iyo sidoo kale faa'iidooyinka canshuuraha ee wanaagsan, iyo kuwani waa qaar ka mid ah sababaha ay tahay sababta ay shirkado badan oo doomo ah u doorteen Belize LDC.